फेरी आयो दुखको खबर : तिब्र गतिको ट्याक्सी सडकबाट ५०० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुदाँ २४ वर्षीय सुमन को ज्यान गयो ! « Onlinetvnepal.com
फेरी आयो दुखको खबर : तिब्र गतिको ट्याक्सी सडकबाट ५०० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुदाँ २४ वर्षीय सुमन को ज्यान गयो !
Published :6November, 2018 7:13 pm
पोखराको पुम्दीभुम्दीमा ट््याक्सी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ग्यारेजमा धुन दिइएको ट्याक्सी आज बिहान ६।३० बजे लिन जाँदा नभेटिएपछि ट््याक्सीधनीले प्रहरीमा खबर गरेका थिए ।
ग्यारेजका मालिक समेत बेखबर रहेको सो घटनाका बारेमा ट््याक्सी दुर्घटनापछि मात्रै हराएको र ट््याक्सी दुर्घटना भएको सत्य बाहिर आएको हो । आइतबार ट्याक्सी धुन भनेर ट्याक्सी चालक राजु थापाले ग्यारेजमा ट्याक्सी छोडेका थिए । सोमबार बिहान जाँदा ट्याक्सी ग्यारेजमा थिएन ।
अनुसन्धानका क्रममा सोमबार राति दुर्घटना भएको ट््याक्सी सोही ट्याक्सी भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ । दुर्घटनामा अन्दाजी २४ वर्षीय सुमन पौडेल ९सुवास० को मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको थप पहिचान खुल्न बाँकी छ ।
ग १ ज ५४३ नं को ट््याक्सी पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीस्थित फलेंटेको मोडमा दुर्घटना भएको हो । ट्याक्सी सडकबाट ५०० मिटर तल खसेको थियो । मृतक पौडेलको घर कास्कीको कृस्तीमा छ । उहाँले सिक्नका लागि राति ट्याक्सी लगेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख नवीन कार्कीले त्यसबारेमा ट््याक्सी धनी जिरो किलोमिटरका प्रेमबहादुर गुरुङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।
सजाज सेवामा अगाडि बढ्दै अरुण पौडेल !
समाजमा परीआएका समस्या मा सहभागी भै समास्या को समाधान गर्न अग्रसीन हुनुहुन्छ पेसाले एक भएता
११ वर्षमै छोरी पाएकी भावनाको अवस्था नाजुक-बच्चाको बाबु काठमाडौंमा….(भिडियो सहित)
१२ बर्षमा छोरी जन्माएकी बर्दियाको गेरुवा गाँउपालीकाकी भावना बस्नेतको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थोलेको छ ।